Pandaw Cruises ugbu a mechiri maka azụmaahịa maka ịdị mma n'ihi COVID-19
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ịtụ egwu » Pandaw Cruises ugbu a mechiri maka azụmaahịa maka ịdị mma n'ihi COVID-19
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Kambodia • Ịtụ egwu • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • India na -agbasa ozi ọma • Akụkọ mgbasa ozi Laos • News • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ na -agbasa Vietnam
Goodbye na Pandaw Cruises
Pandaw kwuputara taa, Ọktoba 26, 2021, na n'ihi mmetụta COVID-19 na-aga n'ihu na njem ntụrụndụ mba ụwa, ọ ga-emechi ụzọ ya.
Ebe a na-aga njem ụgbọ mmiri na Vietnam, Cambodia, Laos na India akwụsịla.
Ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị siri ike na Mianmaa nyekwara aka na mmechi.
Companylọ ọrụ ahụ enweghị ihe ọzọ ma ọ bụghị ịkwụsị ọrụ njem ụgbọ mmiri ya n'ihi enweghị ụkọ ego yana enweghị ike ịchọta ego ọzọ n'ihi nsogbu COVID-19.
Ọ bụ ezie na ntinye akwụkwọ n'ihu maka ịmalitegharị na 2022 ka siri ike, site na nkwado dị ukwuu site na obodo Pandaw na-eguzosi ike n'ihe mgbe niile, ụlọ ọrụ ahụ enweghị ego iji gaa n'ihu na-arụ ọrụ ụgbọ mmiri iri na asaa ha ruo afọ ọzọ, wee nweta mmezigharị dị mkpa iji kwadebe maka ọrụ ọhụrụ. oge nke a na-ejighị n'aka nke ukwuu, ọbụlagodi na-eche na nke a nwere ike ime maka oge oyi 2022/23.
Ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ na-agwụ ike n'ime afọ gara aga ịchọta ndị na-etinye ego ọhụrụ ma ọ bụ ụdị ego ndị ọzọ na-ebufe ụlọ ọrụ ahụ, ma ọ nweghị ihe ịga nke ọma.
Tọrọ ntọala na 1995, Pandaw sụrụ ụzọ njem njem osimiri na Vietnam, Cambodia, Laos, Myanmar, na India na ụgbọ mmiri ndị mara mma ya. Ruo mgbe mmetụta nke COVID, Pandaw enwetawo nkwado nke ndị na-eso ụzọ ndị njem na-eguzosi ike n'ihe, nnukwu mmadụ, na ego na-eto eto kwa afọ na nsonaazụ ego dị mma.
Onye guzobere Pandaw Paul Strachan kwuru, sị: “Nke a bụ oge dị mwute nye mụ, ezinụlọ m, ndị ọrụ ụgbọ mmiri anyị, na ndị ahịa anyị. Ọ na-egosi njedebe nke oge maka anyị niile ka afọ 25 nke ezigbo njem gachara. Ọ na-ewute anyị n'ezie imechu ndị njem anyị oge niile bụ́ ndị na-atụsi anya ime njem mgbe ebuliri ihe mgbochi njem. Obi gbawara anyị maka ndị ọrụ ụgbọ mmiri 300+ na ndị ọrụ n'ikpere mmiri bụ ndị guzoro n'akụkụ Pandaw ma na-atụ anya ịga ọzọ n'afọ na-abịa. "
N'agbanyeghị mmechi nke Pandaw Cruises, Pandaw Charity, nke merela ọtụtụ ihe iji kwado ndị mmadụ na Myanmar n'oge nsogbu na-aga n'ihu ebe ahụ, ga-aga n'ihu n'ọrụ ya n'okpuru nduzi nke ndị nlekọta ya.